Soar Technology Co., Ltd ၏ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူဖြစ်ပါသည် စုံစမ်းကဒ်အပ်စက်ရုံ, အလုပ်ရုံ, တွင်တည်ရှိသည် Taiwan။ နှစ်အတော်ကြာအတွေ့အကြုံနှင့်အတူငါတို့သည်ကိုယ်စက်ရုံတွင်ထားရှိခြင်း, ထိုသို့ထုတ်လုပ်အထူးပြုနေကြတယ်, ကျနော်တို့စျေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်နှင့်အရည်အသွေးကောင်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုပေးနိုင်ပါသည်။ ကြီးမားသောအမိန့်ကိုကြိုဆိုသည်။ သင့်ကိုငါတို့နှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုသိရှိလိုလျှင်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါအခမဲ့ခံစားကျေးဇူးပြုပြီးကျနော်တို့အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသင်တို့နှင့်အတူစကားပြောရွှင်လန်းခြင်းရှိချင်ပါတယ်။
စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အသုံးပြုလေ့စုံစမ်းစစ်ဆေးပစ္စည်းလေးမျိုးရှိပါတယ်:tungsten,ရီနီယမ်အဖြိုက်နက်,ဘီရီလီယမ်ကြေးနီ,နှင့် Palinery-7TM.ရီနီယမ်အဖြိုက်နက်ကိုများသောအားဖြင့်ရွေးချယ်ပါသည်.သူတို့ထဲတွင်,rhenium tungsten သည် tungsten နှင့်ဆင်တူသည်.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.probe-needles.com/my/probe-card-needle.html